Macmiilka Spark mail ayaa la cusbooneysiiyay si uu uga faa'iideysto waxa ku cusub macOS Mojave | Waxaan ka socdaa mac
Macmiilka Spark email ayaa la cusbooneysiiyay si looga faa'iideysto waxa ku cusub macOS Mojave
Saacado yar gudahood, Apple waxay si rasmi ah u sii deyn doontaa qof walbana, nooca ugu dambeeya ee macOS Mojave, Nooca cusub ee Apple ee nidaamka qalliinka ee kombiyuutarada Mac. Si ka duwan noocyadii hore, nuqulkan cusubi lama jaan qaadi karo dhammaan Mac-yada la sii daayay ka hor 2012, markaa dhib ayey ku noqon kartaa dadka isticmaala ee doonaya inay ku raaxeystaan ​​nooca ugu dambeeya ee macOS.
Cimriga Macs aad ayuu u kordhay sanadihii la soo dhaafayIn kasta oo, dabcan, Apple waa inuu bilaabo inuu xaddido tirada qalabka la jaan qaadaya qaybtan si loo dhiirrigeliyo cusboonaysiinta. Iyadoo la tixgelinayo qaar ka mid ah kooxaha awooday inay ku raaxeystaan ​​macOS High Sierra oo leh 9 sano suuqa, tallaabada Apple waa wax ka badan macquul.
Intaan sugeyno Apple inay sii deyso cusbooneysiinta nooca ugu dambeeya ee macOS Mojave, sida asxaabteyda Javier ay faallo ka bixisay, qaar ka mid ah horumariyeyaashu waxay durbaba bilaabeen inay sii daayaan cusbooneysiinta ku saabsan Ka faa'iideyso wararka ka imanaya gacanta nooca cusub ee macOS, marka lagu daro iska ilaalinta dhibaatooyinka iswaafajinta.
Maxaa ku cusub nooca Spark ee 2.0.13
Macmiilka Spark mail wuxuu la midoobayaa adeegyada wicitaanada shirarka ee sida badan loo isticmaalo sida Google Hangouts, Google Meet, Zoom iyo GoToMeeting si aan ugu dari karno iskuxirka shirarka dhacdooyinka adigoon ka bixin dalabka.
Taageerida qaabka cusub ee mugdiga ah, mid ka mid ah sheekooyinka ugu waaweyn ee macOS Mojave.
Qaybta dookhyada dib ayaa loo naqshadeeyay, sidaa darteed way sahlan tahay in la helo xulashooyinka qaabeynta ee aan u baahanahay.
Ragga Spark, dabcan, waxay qaateen fursad ay ku saxaan qaar ka mid ah dhibaatooyinka ay arjiga ku soo bandhigtay cusbooneysiintii hore, wax shaki ku jirin waa la mahadiyey.
Spark ayaa loo heli karaa soo dejin gebi ahaanba bilaash ah Waana ikhtiyaar aad uwanaagsan oo Boostada ah, haddii macmiilka macOS ee asalka ahi uusan daboolin baahiyaheena. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale leedahay nooc loogu talagalay macruufka, sidaas darteed, waxaan had iyo jeer lahaan doonnaa xisaabaadkeenna oo isku dhafan labada qalab.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Macmiilka Spark email ayaa la cusbooneysiiyay si looga faa'iideysto waxa ku cusub macOS Mojave
Sida loo rakibo barnaamijyada dhinac saddexaad ee macOS Mojave
Apple waxay raadineysaa bedello xarunta London Battersea sababo la xiriira dib u dhaca dhismaha